China Apple vagadziri uye vanotengesa | Heritage
Yantai ine nhoroondo refu yekurima maapuro uye ndiyo yekutanga nzvimbo yekurima maapuro muChina.
Chikafu chenhaka shandisa maapuro kubva kuYantai nechigadzirwa cheGeographical Indication.
Iyo yakaomeswa apuro inotapira uye ine yakasarudzika yakasarudzika kuravira inoenderera nenhaka tekinoroji.
Maapuro akaomeswa ane mavitamini ayo anogona kubatsira muviri zvikuru. Maapuro ane mamwe mavhitaminzi A uye C. Aya mavitamini anobatsira kuchengetedza mabhonzo ako neganda riine hutano. Maapuro anewo akawanda mavitamini B. Aya mavitamini anodzora muviri wako wepanyama metabolism uye nekupa chiropa chako uye ganda.
Maapuro akaomeswa anobatsira nehutano hwako nekuda kwezvicherwa zvavo. Potassium ndiyo maminera ayo akakosha kune mauroni uye zviitiko zvehuropi. Iyo zvakare ine imwe simbi, sekureva kweInstitute of Dried Apples, iyo inopa hafu yekapu yeapuro yakaoma, 8% yezuva nezuva simbi inodikanwa yevarume uye 3% yesimbi inodiwa nevakadzi. Muviri unoshandisa simbi iyi kugadzira masero matsvuku eropa. Masero matsvuku eropa ane basa rekuendesa okisijeni kumasero. Uye zvakare, maapuro akaomeswa ane zvimwe zvicherwa zvakaita semhangura, manganese uye selenium.
Maapuro akaomeswa anogona kubvisa kana kudzikamisa zviratidzo zvakajairika senge rakaoma ganda, kutsemuka, pallor, uye akawanda maronda uye anogara kwenguva refu zvirwere zveganda.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kugona uku kwemaapuro akaomeswa kunokonzerwa nekuvapo kwe riboflavin (vhitamini B2), mavitamini C uye A, zvicherwa simbi, magnesium, calcium uye potasium.
Ropa kumanikidza Kugadziridza
Kudya maapuro akaomeswa uye kutonhuwa maapuro akaomeswa kunogona kudzikisa BP. Chidzidzo ichi chakawana kuti hwema chete hwemaapuro akaomeswa hwakadzora BP murwere.
Acids inowanikwa mumaapuro akaomeswa inouraya utachiona panguva yekutsenga uye nekuchenesa mazino uye matadza. Kutsenga apuro rakaomeswa kwakafanana nekushandisa bhurasho remazino rechisikigo. Zvidzidzo zvinoratidza kuti maapuro akaomeswa anogona kuchenesa zvidimbu zvekudya zvakasara pamazino uye pamatadza uye kudzivirira kuora kwemeno uye chirwere chemazino. Kunyangwe avo vakatambura nechirwere chemazamu munguva yakapfuura vanogona kubatsirwa huwandu hwakawanda hwevitamin C mumaapuro akaomeswa.
Nutrients mune maapuro akaomeswa anosimbisa chimiro chemazino. Inosimbisa mazino enamel uye inodzivirira mazino kubva mukuzeya.
Kutsenga maapuro akaomeswa kunoita kuti tsandanyama dzeshaya dzisimbe. Maapuro akaomeswa akareruka uye echisikigo muromo wekushambidza pasina chero zvinowedzerwa nekuda kweanopokana-nekukanganisa mhedzisiro.
Maapuro akaomeswa anovandudza ndangariro. Naizvozvo, zvinobatsira kune avo vanoita basa rehungwaru. Kazhinji, maapuro, nekuda kwavo phosphorus, simbisa tsinga nekurangarira.
Pashure: Mvura Yakasanganiswa Nemichero